Usuku My Pet » 7 Sihlehlela Wonke From New York City Goes On
Uma New York City nomlingani wakho, qinisekisa you onga imizuzu embalwa ufunde leli khasi. Ingabe uhlole ingxoxo ngisho noma awushadile futhi ngifuna partner in the city; ngokuzama ukusikisela okukodwa kwalezi ngothando yakho entsha eyokusiza nakanjani ukudala nombono omuhle. Ngakho, lapha izinsuku eziyisikhombisa wonke umuntu New York City wakhamba (funda kufanele ahambe) on.
1. Ukubuka sunset from the ukuthosa epanini
For imibhangqwana esemisha, le ndawo on the Hudson ngokuqinisekile omunye ezishisa ukuphola izindawo edolobheni njengamanje izindlu. The Pan, okuyinto ngokuyisisekelo a lightship lushone of 1929, safike ovusiwe futhi namuhla esinye amadlingozi kunazo dive imigoqo oyoke uzithole.
Umbono of kwelanga phezu koMfula Hudson ngokuqinisekile ngomdlalo futhi unezela a touch of romance to the ambiance of the bar.
2. Chitha a ntambama romantic at the Brooklyn Botanical Garden
Ngokushesha nje uzoba ufaka leli oasis emadolobheni Prospect Heights, uyozizwa sengathi usufikile miles kude umsindo befuna of the city.
The Brooklyn Botanical Garden unakho yini okwanele umcebo wemvelo ukugcina wena nomlingani wakho waziphatha amahora ambalwa; ngokwesibonelo, the Native Flora Garden, the Cranford Rose Garden, the Shakespeare Garden and more. Nokho, yini othanda kakhulu mayelana indawo induduzo umzukuzuku uthole kwezinye izingxenye eziningi edolobheni.
3. A uhambo oluya Flushing ukudla ezitolo ezinkulu
The ezitolo ezinkulu ukudla Flushing, New York City abadumile zokukhonza esiphundu isiCanton and isiMandarin izitsha.
Lokhu kungaba usuku ephelele bonke foodies bongo. Abantu nge umkhuba ukuthumela izithombe wonke ngesidlo abanakho ekuxhumaneni nomphakathi uyokuthola lo mbono dating ngempela evusa amadlingozi.
4. Kwekuheha emuva ezikhathini:
Ufuna ukuchitha isikhathi esikhulu nomlingani wakho ngesikhathi kuwa? Hlela usuku endlini mlando zendawo endala Richmond Town.
5. Ukuvakashela Central Park
Central Park iyindawo enkulu ukuya nomlingani wakho phakathi nezinyanga zasehlobo. Kuyiqiniso ukuthi ehlobo eNew York City ngokuvamile taxingly ezinomswakama; Nokho, the sezulu kube mnandi once ilanga liyashona. Ngenxa yalokho, phakathi nezinyanga zasehlobo, ungakwazi kalula ukuhlela dates kusihlwa in the open.
Central Park, nazo zonke izinketho ukuzijabulisa it has, Ngokuqinisekile endaweni enkulu ukuya ngosuku.
6. Yiba behleka The Room Slipper
Ukuhlela ukuphuma nomlingani wakho ebusuku ngoLwesibili? Ungakwazi ucabangele ephumula by The Room Slipper. Njalo ngoLwesibili, okubanjelwe Burlesque ezigabeni Seth Herzog sika comedy show. With kuye, Herzog ivame Umama wakhe amazing kanye hilarious.
7. Jabulela usuku movie at Bryant Park
Lokhu kungaba usuku ephelele buffs movie futhi bonke labo fans of zabuna; kodwa, khumbula usuku movie at Bryant Park kufanele njalo kuhlelwe ngeMisombuluko.
Njalo ngoMsombuluko, ekushoneni kwelanga, i movie ongaphandle kuboniswe kulesi ngasese ephethwe park umphakathi. Ezinye Ungadla, ibhodlela lewayini kanye yokulala ukugcina nobabili ethokomele kwakwanele ukuba romantic usuku movie.
Ungase thatha umlingani wakho kusayithi romantic kakhulu New York City, kodwa ukwenza usuku umuntu aphumelele, uyodinga isakhi esiyinhloko futhi uthando.